MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဇန်နဝါရီ 2018 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: ဇန်နဝါရီ 2018
တစ်မိနစ်လျှင် ၆ ကျပ်သာ ကျသင့်မည့် MPT ၏ “ချိုသာ” ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ်သစ်ကို မိတ်ဆက်
(ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၈) – MPT က အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင် သက်သာသော ဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထားအစီအစဉ်သစ် “ချိုသာ” ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အပါအဝင် တစ်မိနစ်လျှင် ၆ ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး စျေးကွက်တွင်းရှိ တစ်ပတ်စာဝယ်ယူသုံးစွဲရသော Voice Pack များထဲတွင် စျေးနှုန်း အချိုသာဆုံးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်သစ်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ကြိုးဖုန်းလိုင်းများ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် နေထိုင်ကြသည့် MPT သုံးစွဲသူများအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ခေါ်မှုအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေ သက်သာစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ “ချိုသာ” အစီအစဉ်ကို တစ်ကြိမ်ရယူပြီးပါက ရ ရက်သက်တမ်းအတွင်း ၂၃၅ မိနစ်စာ ဖုန်းပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် အခွန်အပါအဝင် အသုံးပြုခ ၁၅၀၀ ကျပ်သာ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် တစ်ရက်တာ နှင့် သုံးရက်တာသက်တမ်းရှိ Voice Pack များအပြင် “ချိုသာ”အစီအစဉ်က MPT သုံးစွဲသူများအတွက် အသက်သာဆုံးသော နှုန်းထားနှင့် သုံးစွဲသူများကို စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီအစဉ်နှင့်အတူ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၂၈ သန်း ကျော်သော သုံးစွဲသူများသို့ အကျယ်ပြန့်ဆုံးကွန်ရက်မှ တစ်ဆင့် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အမည် နှုန်းထား (ကျပ်) အခွန်ပါဝင်ပြီး
MPT မှ MPT ဖုန်းသို့ ခေါ်ဆိုချိန် (မိနစ်) သက်တမ်း
ချိုသာ ၁၅၀၀ကျပ် ၂၃၅ မိနစ် ၇ရက်
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ချိုသာ အစီအစဉ်သစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် တကယ့်ကိုပဲ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့အသံကို စဉ်ဆက်မပြတ်ကြားနေနိုင်ဖို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ်ကို ၆ ကျပ်ပဲကျသင့်မယ့် ဒီအစီအစဉ်သစ်က အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ဖုန်းခတွေကို အလွန်ပဲသက်သာသွားစေမှာဖြစ်သလို ချစ်သူများနေ့မှာ အနေဝေးနေကြရမယ့် ချစ်သူတွေ၊ အိမ်နဲ့ဝေးနေရတဲ့ မိသားစုတွေအတွက်လည်း ပိုပြီးနွေးထွေးပြည့်စုံသွား စေမယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ကွန်ရက်ပေါ်မှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် အခုအစီအစဉ်သစ်က သုံးစွဲသူတွေကို ကျေနပ်အားရစေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားပါသည်။
MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှုအတွက် အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်သည့် “ချိုသာ” ဝန်ဆောင်မှုကို MPT ၏ GSM နှင့် WCDMA ဖုန်းသုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့အထိ ရယူသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အစီအစဉ်ကို ရယူအသုံးပြုလိုသူများ အနေဖြင့် *106*1*1# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) အန်းဒရွိုက် နှင့် iOS များအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသည့် MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း ပေါ်မှလည်းကောင်း ရယူအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ၄င်းအစီအစဉ်ကို တစ်ပတ်ချင်းစီ သက်တမ်းတိုးအသုံးပြုရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များရှိပါက www.mpt.com.mm (သို့မဟုတ်) နီးစပ်ရာ MPT အမှတ်တံဆိပ် အရောင်းဆိုင်များတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 30, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
မြန်မာလူငယ်နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၁၈၏ ဖိုင်နယ်အဆင့်သို့ အဖွဲ့(၁၀) ဖွဲ့ အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်
(ရန်ကုန်၊ ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈) – မြန်မာလူငယ် နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၁၈ ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သော တစ်ပတ်တာ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ခြင်း အစီအစဉ်အတွက် အောက်မြန်မာ ပြည်ကိုယ်စားပြု (ရန်ကုန်) နှင့် အထက်မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြု (မန္တလေး) မှ ယှဉ်ပြိုင်ကြသော အဖွဲ့များ ကို ဂုဏ်သရေရှိ အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးမင်းများ မှ ရွေးချယ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်မည့် လူငယ်များနှင့် နည်းပညာဆက်စပ်နယ်ပယ်များတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြမည့် လူငယ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြု (ရန်ကုန်) အဖွဲ့ (၁၃) ဖွဲ့ နှင့် အထက်မြန်မာပြည် ကိုယ်စားပြု (မန္တလေး) အဖွဲ့ (၁၃) ဖွဲ့ တို့မှ ၄င်းတို့၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအပြင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်မှု စသည့် အချက်များအပေါ်တွင် အခြေခံကာ ရွေးချယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ရှေ့တွင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြု မှ အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့ နှင့် အထက်မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့ ပဏာမရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားများကို ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ နှင့် ၂၇ ရက်နေ့တို့တွင် Yangon MICT- Park နှင့် မန္တလေးမြို့ ရတနာပုံစူပါစင်တာရှိ Mandalay MICT-Park တွင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ပါသည်။
မြန်မာလူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၁၈ ၏ ပဏာမရွးချယ်ခံခဲ့ရသည့် အဖွဲ့များမှာ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ၄င်းတို့ ထုတ်ကုန်များ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးဝင်ပုံ အကြောင်း အရာများကို သရုပ်ပြရှင်းလင်းခဲ့ကြပါသည်။ အထက်မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြု (ရန်ကုန်) မှ အရွေးချယ်ခံရသည့် အဖွဲ့များမှာ My Player, Secret Art, Cyber E-Sports Portal, Butterfly and Doctor Kyaw နှင့် အထက်မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြု (မန္တလေး) အရွေးချယ်ခံရသည့် အဖွဲ့များမှာ Myanmar CNC, Baby Lovers, Team Liquid, Team Hexasky and Particles တို့ ဖြစ်ပါသည်။
စကာတင်ရွေးချယ်ခံရသည့် အဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့ အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်း ရရှိမည်ဖြစ်သည့် အပြင် ၄င်းတို့၏ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်များကို အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးများ နှင့် မီဒီယာများရှေ့တွင် ပြသထုတ်ဖော်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက် စေရန်အတွက် တိုးတက်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးများ ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ၊ Hackathons၊ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်များ တိုးတက်စေရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပါဝင်သည့် အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြား မှုများကို တစ်ပတ်တာ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် မိမိတို့ မျှော်လင့်ထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အိမ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားထားသော ဂုဏ်သရေရှိ အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးမင်းများ ၏ အကူအညီဖြင့် စီစစ်ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရွေးချယ်ခံရမည့် အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ကို ၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်စေပြီး အဆုံးဖြတ် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆုကြေးငွေ ကျပ်သိန်းငါးဆယ် (၅,၀၀၀,၀၀၀) နှင့့်အတူ ၂၀၁၈ မတ်လတွင် စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြု စင်တာဖြစ်သည့် Kanaung Hub တွင် အခြားသော အောင်မြင်မှုရရှိနေသည့် လုပ်ငန်းငယ်များနှင့်အတူ အနီးကပ် အလုပ်လုပ်ကိုင် နိုင်မည့် ရုံးခန်းနေရာတစ်ခုကို ၆လ တိတိ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အနိုင်ရရှိသော အဖွဲ့သည် လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်မည့်သူများ၏ အနီးကပ်ကူညီထောက်ပ့ံမှုကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်း နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် အောင်မြင်နေသည့် ကြီးကြပ်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးမှုဖြင့် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းကို အကောင်းဆုံးတိုးတက်စေမည့် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် အနေနဲ့ အခုလို မြန်မာလူငယ် နည်းပညာ စွန့်ဦးတီထွင် ဖွ့ံဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၁၈ ကို MPT နဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး လူငယ်တွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စိတ်ကူးအတွေးတွေကို အကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အထူးပဲ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ အနိုင်ရရှိမယ့် အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ နဲ့အတူ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် အဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ၊ ဆုကြေးငွေ နဲ့ ထောက်ခံမှုတွေအတွက် ဒီအချိန်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အချိန်ကာလတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဦးခွန်ဦး မှ ပြောကြားပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Yoshiaki Benino က “နည်းပညာ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ စီးပွားရေးနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေမှာ အကျိုးရှိမယ့် အရမ်းကို ဆန်းသစ်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအမျိုးမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Audio book တွေကနေ patient queue flow စနစ်တစ်ခုအထိ စီးပွားရေး နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ နည်းစနစ်တွေကို လေ့လာဆန်းသစ်မှုတွေကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ MPT အနေနဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရဲ့ လူငယ်တွေအကြားမှာ တိုးတက်လာစေရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ သံန္နိဋ္ဌာန် ချထားပါတယ်။ နောက်ပြီး အနာဂတ်မှာ ဒီအစီအစဉ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေဖို့နဲ့ MCF နဲ့ အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလိုအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကြောင့် အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နေတဲ့ စျေးကွက်နေရာတစ်ခုမှာ လူငယ်တွေ အောင်မြင်မှုအလားအလာရရှိစေဖို့အတွက် ကျော ထောက်နောက်ခံဖြစ်စေမယ့် စီးပွားရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အရည်အသွေးတွေ ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေက လေ့လာသင်ယူနိုင်စေဖို့အတွက် ခွန်အားရရှိစေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားပါသည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သတ်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.mmtechnopreneurship.com (သို့မဟုတ်) MPT နှင့် MCF တို့၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာများတွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 29, 2018 ဇန်နဝါရီ 30, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
GENERAL » Default Language ပြောင်းလဲခြင်း
၁။ MPTက ပေးပို့တဲ့ SMS “Mingalarbar! Your default language have been changed to Burmese from now on. You will receive MPT SMS in Burmese. If you want to change it to English please dial *106*7*1#“ ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ Default Language Change ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ။
သုံးစွဲသူများ၏ အကြံပေးချက်အရ MPT သည် default language ကို မြန်မာဘာသာစကားသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် MPT မှ ပေးပို့သော စာတိုများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ USSD Menu ကိုလည်း မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ယခုပြောင်းလဲမှုသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Default Language ကို English ဘာသာသို့ပြောင်းလို့ရပါသလား။
ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ *106*7# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကား(Eng or Burmese) သို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Default Language ကို English ဘာသာစကားသို့ပြောင်းလဲရန် *106*7*1# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပါ။
Default Language ကို မြန်မာဘာသာစကားသို့ပြောင်းလဲရန် *106*7*2# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပါ။
၃။ Default Language မြန်မာဘာသာစကားသို့ပြောင်းလဲခြင်းက MPT SIM Card အသစ်အသုံးပြုသူတွေအတွက်ပါပဲလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိတွင် English Default Language နှင့် MPT SIM Card အသစ်အသုံးပြုသော GSM/WCDMAဖုန်းအသုံးပြုသူများ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ MPTမှ ပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်း SMSများကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်။
MPTမှ ပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်း SMSများကိုလက်ခံရယူလိုခြင်းမရှိပါ။ အခမဲ့ All GSM/WCDMA ရက် (၉၀) 2007 သို့ “ SMSOFF” ဟု ပေးပို့ခြင်း။
MPTမှ ပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်း SMSများကို လက်ခံရယူမည်။ အခမဲ့ All GSM/WCDMA – 2007 သို့ “ SMSON” ဟု ပေးပို့ခြင်း။
DND Function သည် MPTမှ ပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်း SMSများကို လက်ခံရယူမည် (သို့ ) လက်ခံရယူလိုခြင်းမရှိပါ အစရှိသဖြင့် ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ “2007” သို့ “SMSOFF” ဟု ပေးပို့ပါက MPTမှပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်း SMS များကို ရက်(၉၀)ကြာ လက်ခံရရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ရက်(၉၀)နောက်ပိုင်းတွင် ပရိုမိုးရှင်း SMSများကို ပြန်လည်ရယူလိုပါက 2007” သို့ “SMSON” ဟု ပေးပို့ခြင်း (သို့ ) MPT Call Center ၏ ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆သို့ အခမဲ့ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရက်(၉၀)ပြည့်ပါက MPTမှပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်းSMSများကို လက်ခံရရယူလိုခြင်း ရှိ၊ မရှိကို စာတိုပေးပို့ အကြောင်းကြားပါမည်။ သုံးစွဲသူစိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ MPTမှပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်းSMS များကို ရပ်ဆိုင်းရန်လျှောက်ထားပြီးပါက ရက်အနည်းငယ်အတွင်း လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်ကြောင်းကို SMS ပေးပို့ အသိပေးပါမည်။ MPTမှပေးပို့သော ပရိုမိုးရှင်းSMS များသာ ရပ်ဆိုင်းသွားပါမည်။ အခြားMPTမှပေးပို့သော အခြားအရေးကြီးသည့် SMS များကိုမူ ဆက်လက်ရရှိနေမည်ဖြစ်ပါမည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 15, 2018 ဩဂုတ် 7, 2018 Categories General mm
3G ကွန်ရက်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်း နန်းယွန်းမြို့တွင် MPT မှ ပထမဆုံးဖြန့်ကျက်နိုင်
(ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈) – MPT အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ရှိ စစ်ကိုင်းတိုင်း နန်းယွန်းမြို့တွင် 3G အင်တာနက်ကွန်ရက်ကို ပထမဆုံးဖြန့်ကျက်ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်စွာ ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
ယခုလို ဝန်ဆောင်မှုကို နာဂဒေသခံပြည်သူများ နှစ်စဉ်ဆင်ယင်ကျင်းပသည့် နာဂရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကာလ ဖြစ်သည့် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်မှ ၁၆ ရက်နေ့ အတွင်း MPT က စတင် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရာပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အား အရောင်အသွေး စုံလင်ကွဲပြားသော ရိုးရာဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ကာ ရိုးရာအကအလှဖြင့် ဖျော်ဖြေမှုများကို သာယာလှပသော မြစ်ကမ်းပါးတစ်လျှောက် ဆင်နွှဲကြမည်ဖြစ်ပြီး ရာသီဥတု ကောင်းမွန်စေရေး၊ ကောက်ပဲသီးနှံ့များ ပေါကြွယ်ဝစေရေး နှင့် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာစေရေးအတွက် ဆုတောင်းကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT သည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို ဖော်ဆောင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံကိုရှေ့သို့လှမ်းချီ နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်နှင့်အညီ နန်းယွန်းမြို့တွင် ကွန်ရက် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၌ မူလကဂြိုလ်တုအခြေပြုနည်းပညာမှ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် နည်းပညာသို့ ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံးကွန်ရက်ပေါ်တွင် ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့် ဒေတာအမြန်နှုန်း နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အရည်အသွေးများကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အလွန်ဝေးကွာပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများစွာရှိသည့် နန်းယွန်းမြို့တွင် အခက်အခဲများစွာကြားမှ ကျော်လွှားကာ အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့် အတွက် များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ နည်းပညာဌာန အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Noboru Edagawa က “ အမြန်ဆုံး အင်တာနက် ဆုရရှိထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MPT ကွန်ရက်ကို နန်းယွန်းမြို့မှာ ချဲ့ထွင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ ကြေညာအပ်ပါတယ်။ ဒီဒေသအတွက် 3G ကွန်ရက်ကို ကျွန်တော်တို့က ပထမဆုံးအဖြစ် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ််ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ နည်းပညာ တိုးတက်စေရေး အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ ကိစ္စဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်း အရေးကြီးဆုံး အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ အခြားအခြေအနေတွေကြောင့် အဲ့ဒီ ဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် အင်တာနက်ရရှိစေရေးဟာ အခုချိန်မတိုင်ခင်အထိ စိန်ခေါ်စရာ အချက်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောကြားပါသည်။
“အခုလို MPT ရဲ့ 3G အင်တာနက်ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုကို ချဲ့ထွင်လိုက်ခြင်းက မြေပုံပေါ်မှာ တည်ရှိနေမယ့် အမှတ်အသားတစ်ခုထက် ပိုမိုလေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး အဲဒီဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရာမှာ ပိုပြီး ကောင်းမွန်မယ့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ရရှိလာ တာက ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ မနက်ဖြန်တွေအတွက် MPT အနေနဲ့ လေးနက်တဲ့ ကတိတစ်ရပ်ကို ပေးအပ် လိုက်တာနဲ့အညီ အရေးပါတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာဖွေတွေ့ ရှိခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ နန်းယွန်းဒေသခံ ပြည်သူတွေကို ဒီခရီးမှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတူလိုက်ပါပြီး ဒေသခံ MPT ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်အတူ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဒီ 3G ကွန်ရက် ပေါ်ကနေ အတူတကွ ပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 12, 2018 ဇန်နဝါရီ 16, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူး နေရာများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက် ကြေညာခြင်း
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ခေါ်ယူ ထားသော လစာနှုန်းကျပ်(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူး နေရာများ အတွက် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ၏ အမည်စာရင်းကို(၃-၁-၂၀၁၈)ရက်နေတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် သူများ၏ အမည်စာရင်း၊ သတင်းပို့ရမည့် ရက်/ အချိန်နှင့် လူတွေ့ စစ်ဆေးမည့် ရက်/ အချိန်စာရင်းတို့ကို (၁၂-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန Website, MPT Website နှင့် Official Facebook Page များတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။
၃။ လူတွေ့ဖြေဆိုသူများသည် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စီမံရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန(အမှတ်၊ ၄၄/ ၁၁၄ )အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် သတင်းပေးပို့ရန်နှင့် ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်။
အချိန်ဇယားအသေးစိတ်အား အောက်ပါ Link သို့ နှိပ်၍ Download ပြုလုပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 12, 2018 Categories Latest Newsmm
MPT ၏ နေ့စဉ်သုံး Facebook ဒေတာအပိုလက်ဆောင် အစီအစဉ်သစ်ကြောင့် ချစ်ခင်ရသူများအကြား အဆက်အသွယ်မပြတ် ချိတ်ဆက်နိုင်တော့မည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀) – MPT သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူများအတွက် နေ့စဉ်သုံး Facebook ဒေတာအပိုလက်ဆောင် ရရှိမည့် အစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်ကို ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့မှစ၍ သုံးစွဲသူများ ထံသို့ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် E-Top up ငွေဖြည့်စနစ် (သို့မဟုတ်) မိုဘိုင်းလ် ဘဏ်စနစ်ကိုအသုံးပြု၍ ငွေဖြည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့် Facebook ၊ Messenger ၊ Viber ၊ LINE ၊ Instagram စသည့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများကို အသုံးပြုနိုင်မည့် ဒေတာအပိုဆုလက်ဆောင်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံးသော MPT ၏ မိုဘိုင်းလ် ကွန်ရက်ပေါ်တွင် မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ နှင့် ချစ်ခင်ရသူများအကြားတွင် အချိန်ကြာကြာပိုမိုဆက်သွယ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “သုံးစွဲသူတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ရက်ကိုသုံးပြီး Facebook နဲ့ အခြား လူမှုကွန်ရက်တွေ ပေါ်ကနေ သူတို့နှစ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုရတာကို ဘယ်လောက်အထိ နှစ်သက်ကြသလဲဆိုတာကို MPT က သိရှိနားလည်ထားပါတယ်။ မြန်မာ့အမြန်ဆုံးအင်တာနက်ဆုရရှိထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LTE+ ကွန်ရက်ပေါ်ကနေ ဒေတာသုံးစွဲနှုန်းတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ခြောက်လအတွင်းမှာပဲ သိသိသာ သာ မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရသလို ဆိုရှယ်မီဒီယာအခန်းကဏ္ဍဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေ နှစ်သက်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကို နေ့စဉ်သုံးစွဲဖို့အတွက် ဒေတာအပိုဆောင်းလက်ဆောင်ပေးအပ်မယ့် အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါပြီ။ သုံးစွဲသူတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး သတိထားစေချင်တာကတော့ ခဲခြစ်ငွေဖြည့်ကတ်တွေနဲ့ ငွေဖြည့်သွင်းရင်တော့ ဒေတာအပိုလက်ဆောင်ကိုရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငွေဖြည့်သွင်း ရတာလွယ်ကူတဲ့ E-Top Up ငွေဖြည့်စနစ်က ဖုန်းသုံးနေတဲ့အခါမှာ အလွန်အဆင်ပြေစေသလို အချိန်ကုန်လည်းသက်သာစေမှာဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေတာအပိုလက်ဆောင်အစီအစဉ်တွေလည်း ရရှိစေမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်သုံး Facebook ဒေတာအပိုလက်ဆောင် အစီအစဉ်သစ်ကို နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်” ဟု ပြောကြားပါသည်။
ဒေတာအပိုလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာ ငွေဖြည့်သွင်းသည့်ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ငွေများများဖြည့်သွင်းပါက နေ့စဉ်သုံး Facebook ဒေတာအပိုလက်ဆောင်ကို ပိုမိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သောကြာနေ့တိုင်းတွင် ငွေဖြည့်သွင်းပါက ယခုနေ့စဉ်ရရှိမည့် နေ့စဉ်သုံး Facebook ဒေတာအပိုလက်ဆောင် အပြင်၊ ယခင်က Happy Friday အပိုလက်ဆောင်ကိုပါ ထပ်ဆောင်း ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်သုံး Facebook ဒေတာအပိုဆုလက်ဆောင် ကို (၃) ရက်အတွင်း အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပြီး ခဲခြစ်ငွေဖြည့်ကတ်များ နှင့် ၁,၀၀၀ ကျပ်အောက်ငွေဖြည့်သွင်းမှုများအတွက် ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အသုံးပြုနိုင်မည့် Social App များ
E-Top up ငွေဖြည့်စနစ် ခဲခြစ် ငွေဖြည့်ကတ် မိုဘိုင်းလ် ဘဏ်စနစ်
၅၀၀ – – – – ဆိုရှယ်မီဒီယာများ (Facebook, Messenger, Viber, LINE, Instagram)
၁,၀၀၀ ၅၀ – ၅၀ ၃ရက်
၃, ၀၀၀ ၁၅၀ – ၁၅၀
၅, ၀၀၀ ၂၅၀ – ၂၅၀
၁၀, ၀၀၀ ၅၀၀ – ၅၀၀
၂၀, ၀၀၀ ၁, ၀၀၀ – ၁, ၀၀၀
၃၀, ၀၀၀ ၁, ၅၀၀ – ၁, ၅၀၀
၄၀, ၀၀၀ ၂, ၀၀၀ – ၂, ၀၀၀
၅၀, ၀၀၀ ၂, ၅၀၀ – ၂, ၅၀၀
၆၀, ၀၀၀ ၃, ၀၀၀ – ၃, ၀၀၀
၇၀, ၀၀၀ ၃, ၅၀၀ – ၃, ၅၀၀
၈၀, ၀၀၀ ၄, ၀၀၀ – ၄, ၀၀၀
၉၀, ၀၀၀ ၄, ၅၀၀ – ၄, ၅၀၀
၁၀၀, ၀၀၀ ၅, ၀၀၀ – ၅, ၀၀၀
ဒေတာအပိုဆုအစီအစဉ်၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မှာ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ယခုသတင်းထုတ်ပြန်ချက် နှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက http://mpt.com.mm/mm/ နှင့် MPT အမှတ်တံဆိပ်ပါ အရောင်းဆိုင်များတွင် စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 10, 2018 ဇန်နဝါရီ 10, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ၂၀၁၈ ရာသီသစ် ပွဲစဉ်ကို မုံရွာကွင်းတွင်ကျင်းပမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်) – မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် နှင့် MPT တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပထမဦးဆုံးသော MPT မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ၂၀၁၈ ရာသီပွဲစဉ်များကို မကြာမီ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမမြောက်ပွဲစဉ်အဖြစ် စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက် နှင့် ရခိုင်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့ အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားမှလည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် နှင့် MPT တို့၏ သဘောတူညီမှုနှင့်အတူ ယခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံးသော ပွဲစဉ်များကို ကျင်းပလိုက်ပြီဖြစ်ကာ “နိုင်ငံ၏သည်းခြေကြိုက်အားကစား” ကို ရေရှည်အောင်မြင် တိုးတက်စေရေး အားပေးကူညီ ထောက်ပံ့ရန် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိကလေးငယ်များ နှင့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ် ဘောလုံးသမားများ အကြား ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော လူနေမှုဘဝပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် ယူ-၁၄ နှင့် တက္ကသိုလ်အဆင့် ပြိုင်ပွဲများအတွက် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများအပြင် အသက် ၆ နှစ် မှ ၁၂ နှစ်အရွယ် ကလေးများအတွက် MPT ၏ အခြေခံအဆင့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကိုလည်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး အသက်အရွယ်အုပ်စုများအားလုံး ဘောလုံးအားကစားလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ MPT အနေဖြင့် မြန်မာလူငယ်များ၏ ဘောလုံးစွမ်းရည်အား နိုင်ငံတကာအဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်သည်အထိ တိုးတက်နိုင်စေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
MPT မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ၂၀၁၈ ပထမမြောက်ပွဲစဉ်ကို ဇန်နဝါရီ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့အားကစားကွင်း၌ စတင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း ပျော်ရွင်လှိုက်လှဲစွာ ကြေညာလိုက်ပါသည်။ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်-၁ ၏ ပထမပွဲစဉ်အဖြစ် ထိပ်တန်းအသင်း ၁၂ သင်းက ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် ဘောလုံးဝါသနာရှင်များ နှစ်သက်ကြသည့့် ရှမ်းယူနိုက်တက် နှင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်တို့၏ ယှဉ်ပြိုင် ကစားမှုကို ပြန်လည်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအပတ် ပွဲစဉ်(၁)အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပွဲများကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁. ၁၁-၁-၂၀၁၈ စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက် နှင့် ရခိုင်ယူနိုက်တက် မုံရွာမြို့အားကစားကွင်း ညနေ ၃:၃၀ (Live)
၂. ၁၂-၁-၂၀၁၈ ဇွဲကပင်ယူနိုက်တက် နှင့် ရှမ်းယူနိုက်တက် သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်း ညနေ ၄:ဝဝ (Live)
၃. ၁၃-၁-၂၀၁၈ မြဝတီအက်ဖ်စီ နှင့် မကွေးအက်ဖ်စီ အောင်ဆန်းကွင်း ညနေ ၄:ဝဝ (Live)
၄. ၁၄-၁-၂၀၁၈ ဟံသာဝတီယူနိုက်တက် နှင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ပဲခူးကွင်း ညနေ ၃:၃၀ (Live)
၅. ၁၅-၁-၂၀၁၈ ဆောက်သမ်းမြန်မာ နှင့် ဂျီအက်ဖ်အေ မော်လမြိုင်အားကစားကွင်း ညနေ ၄:ဝဝ
၆. ၁၅-၁-၂၀၁၈ ရတနာပုံအက်ဖ်စီ နှင့် ဧရာဝတီယူနိုက်တက် မန္တလာသီရိကွင်း ညနေ ၄:ဝဝ
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ဘောလုံးဝါသနာ ရှင်များနဲ့အတူ MPT မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ၂၀၁၈ ပထမမြောက်ပွဲစဉ်တွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ။ ဒီနှစ် MNL လိဂ်-၁ မှာ အကောင်းဆုံး ထိပ်တန်းအသင်း တွေရဲ့ယှဉ်ပြိုင်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်တာနဲ့အညီ နိုင်ငံရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ အတွက် ဘောလုံံးအားကစားတိုးတက်အောင်မြင်ရေးကို ကူညီထောက်ပံ့ခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲစွာဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ မြန်မာဘောလုံးအားကစားအတွက် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၊ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ သိရှိထားတဲ့ MPT အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ စုပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုကနေတစ်ဆင့် တစ်နိုင်ငံလုံးက ဘောလုံးဝါသနာရှင်အားလုံးအတွက် စိတ်ကျေနပ်စရာ ရလာဒ်ကောင်းတွေကို ဖော်ဆောင်ပေး နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်” ဟု MPT-KSGM Joint Operations မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က ပြောကြားပါသည်။
“မြန်မာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေက အခုဆို နောက်ထပ်ရာသီသစ်အတွက် ထပ်မံရောက်ရှိလို့လာပြန်ပါပီ။ MNL အနေနဲ့ ဘောလုံးအားကစားပွဲအတွက် စိတ်အားထက်သန်နေသလို ဒီနှစ်မှာ MPT နဲ့ အတူတူ လက်တွဲပြီး ဘောလုံးကစားသမားတွေအတွက်လည်း အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အောင်မြင်မှုတွေ ဖော်ဆောင် နိုင်မှာဖြစ်သလို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့ ဘောလုံးအားကစားဝါသနာရှင်တိုင်းအတွက်လည်း ထို့အတူပဲ ခံစားရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ပြန်လည်ကျင်းပတဲ့ MNL လိဂ်-၁ နဲ့ လိဂ်-၂ ကစားပွဲတွေမှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ရလာဒ်ကောင်းတွေ ရရှိလာဦးမယ်လို့လည်း ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီရာသီပွဲစဉ်တွေကို လာရောက်ကြည့်ရှုပြီး ကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုဝင်တွေကြားမှာပါ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ဖွယ် အခိုက်အတန့်တွေ ရရှိလာစေမှာဖြစ်လို့ လူတိုင်းလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။” ဟု မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်၏ စီအီးအိုဖြစ်သူ ဦးစိုးမိုးကျော်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 9, 2018 ဇန်နဝါရီ 10, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူး နေရာများအတွက် အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ခေါ်ယူထားသော လစာနှုန်းကျပ် (၁၈၀၀၀ဝ-၂ဝဝဝ-၁၉ဝဝဝဝ) ဒုတိယကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူစာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ပါသည်။
၂။ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ၏ အမည်စာရင်းကို (၃-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန Website, MPT Website နှင့် Official Facebook Page များတွင် ထုတ်ပြန်​ ကြေညာထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက်နှင့် သတင်းပို့ရမည့်ရက်ကို ထပ်မံကြေညာသွား မည်ဖြစ်ပါ သည်။
အောင်စာရင်းအပြည့်အစုံကို အောက်ပါ Link တွင် သွားရောက်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 3, 2018 ဇန်နဝါရီ 3, 2018 Categories Latest Newsmm
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇန်နဝါရီ 2, 2018 ဇန်နဝါရီ 2, 2018 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm